Mutemo mutsva weEU ucharambidza vashanyi vasina kubayiwa kubva kunze kwebloc
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Mutemo mutsva weEU ucharambidza vashanyi vasina kubayiwa kubva kunze kwebloc
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Chikumbiro cheKomisheni chinoda kucheneswa neEuropean Council, uye kana chikapasiswa chichashanda kunyika dzese dzeEU kunze kweIreland, iyo isiri nhengo yeSchengen Area isina muganhu.
The European Commission (EC), Bazi guru re European Union, yapa chirevo nhasi, ichikurudzira kuti nyika dzese dziri nhengo dzeEU dzibvumire chete vafambi, vakapora, kana vakakosha vafambi (sevatyairi vemarori) vanobva kunze kweEuropean bloc, kubva munaKurume 2022.
Vangave vashanyi vangazofanira kuratidza kuti vakapedzisira kubaiwa pasina kupfuura mwedzi mipfumbamwe vasati vapinda, danho rinoita kuti kupfura kwebooster kunofanirwa kune vafambi vazhinji.
Pasi pemitemo mitsva yakarongwa, vashanyi vaizoda booster kupfura mwedzi mipfumbamwe yega yega.
The EU pari zvino inokurudzira kuti nyika dziri nhengo dzibvumire vafambi vanobva parudungwe rwenyika dzinopfuura 20 dzine “mamiriro ezvinhu akanaka edenda.” Vafambi vanobva kunzvimbo idzi - dzinosanganisira Canada, New Zealand, uye UAE - vanobvumidzwa kupinda muEU vaine chitupa chekudzivirira, humbowo hwekupora, kana humbowo hweiyo COVID-19 bvunzo.
Pasi pemitemo mitsva iyi, runyorwa urwu rwaizopedzwa, uye vafambi vega vanobvumirwa kupinda zvichienderana nejekiseni ravo rekudzivirira kana kupora chete.
Parizvino, European Medicines Agency (EMA) yakabvumidza vaccine nePfizer, Moderna, AstraZeneca, naJanssen. Sputnik-V yekuRussia iri kuongororwa nesangano iri, sekupfurwa kwakaitwa naSanofi-GSK uye Sinopharm yeChina.
Pasi pechikumbiro chitsva, the European Union yaizopa kupinda kune vafambi vanobaiwa mapfuti akabvumidzwa neWorld Health Organisation (WHO), asi kwete EMA. Izvi zvinochenesa chero munhu akajairwa neSInopharm, Sinovac, uye maviri eIndia-akagadzirwa majekiseni kuti apinde, chero vachipa mhedzisiro yebvunzo yakaipa pamwe neumbowo hwekudzivirira.
Inenge 67% ye EU vagari parizvino vari kubaiwa nhomba yeCCIDID-19, kunyangwe nyika dzega dzakaona mazinga akasiyana ekutora.
Nekudaro, kunyangwe muIreland, iyo ine huwandu hwepamusoro hwekudzivirira mubloc pa93%, svondo rega rega nyaya dzehutachiona dzakapetwa katatu kubva kutanga kwaGumiguru, uye hurumende yeIrish iri kufunga nezvezvirambidzo zvitsva zvehupenyu hwezuva nezuva.
"Zviripachena kuti denda harisati rapera," Commissioner weEuropean, Didier Reynders akadaro nemusi weChina, achiwedzera kuti "mitemo yekufamba inofanirwa kutarisisa mamiriro ezvinhu aya."